Shariif Oo Odayaasha La Kulmay. | Gedoonline
Shariif Oo Odayaasha La Kulmay.	Added by Editor on June 30, 2012.Saved under Latest News	Muqdisho-(GMN) Madaxwayanaha Dowlada KMG ah ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmad ayaa maanta Odayaasha dhaqanka kala hadlay arimaha Dastuurka Cusub.
Madaxwayanaha ayaa booqday halka shirku Odayaasha uga socdo waxaana uu ugu horayn uga warbxiyay Safaradii Dalka Dibadaiisa uu ku tagay gaar ahaan Shirkii Burcadbadeeda iyo Wadahdalkii Maamulka Somaliland.
Sheekh Shariif waxaa uu sheegay in kulamadaas ay Guulo kusoo dhamaadeen wax la taaban karana kasoo baxeen.
Madaxwaynaha waxaa uu Odayaasha dhaqanka ka codsaday inay soo gudbiyaan Liiska Ergadii ansixin lahayd Dastuurka cusub maadaama Dastuurka loosoo bandhigay.
Madaxwayanaha ayaa Odayaasha u sheegay in dunida iyo Madaxda Dowladaba ku howlanyihiin sidi looga bixi lahaa wakhtiga Kumeel gaarnimada sidaasi darteedna la dadajiyo ergadii ansixin lahayd Dastuurka cusub.
Madaxwaynaha Dowlada KMG ah Sheekh Shariif ayaa shalay soo gaaray Magaalada Muqdisho ee Caasimada Soomaaliya isaga oo kasoo laabtay Dalka Isutaga Imaaraatka Carabta halkaas oo uu uga qaybgalay Kulamo Caalami ah.
Dastuurka Oo Odayaasha Farta Laga Saaray.
Shariif Oo Muqdisho Ku Laabtay.